Amandla Enuzi, Ukwakhiwa Nokufudumeza, Ukugcinwa Kwamanzi - KAIQUAN
IShanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd.ngenye yomkhiqizi omkhulu wepompo ochwepheshe, onguchwepheshe wokucwaninga nokuklama, ukukhiqiza nokuthengisa amaphampu asezingeni eliphakeme, izinhlelo zokuphakelwa kwamanzi nezinhlelo zokulawula amaphampu. Ihola imboni yokukhiqiza impompo eChina. Ingqikithi yabasebenzi ingaphezu kwe-5000, equkethe ngaphezu kwe-80% yabaphethe idiploma yasekolishi, onjiniyela abangaphezu kwe-750, unjiniyela omkhulu nodokotela. KAIQUAN iqembu ungumnikazi 5 amapaki Industrial Ngo Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning futhi Anhui nge endaweni Imininingwane 7,000,000 square metres.
(I-Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co, Ltd. ibingumkhiqizi ochwephesha kakhulu wama-motors angaphansi kwamanzi kanye namaphampu kagesi angaphansi kwamanzi angahulumeni wase China kazwelonke).
I-Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd. yasungulwa ngo-2005 ngokutshalwa kwemali okuphelele kwezigidi ezingama-20 zama-USD, ehlanganisa indawo ephelele yamamitha-skwele angama-47,000 nendawo yokwakha cishe kwamamitha-skwele angama-22,000. Njengamanje, inochwepheshe abangama-250, ochwepheshe abaphezulu bezobunjiniyela kanye nabasebenzi abanamakhono. Kukhona ulayini wokukhiqiza we-resin othuthukile emhlabeni kanye nezihlanganisi zesihlabathi eziqhubekayo. Zonke izikhala zisebenzisa ukubunjwa kwesihlabathi se-phenol futhi inezithando ezi-2-ton & 1-ton eziphakathi nendawo ezingaphonsa izingcezu ezingamathani ayi-8. Ngaphezu kwalokho, inamasethi angaphezu kuka-300 emishini esezingeni eliphakeme.
I-Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd.iyinkampani ephethwe ngokuphelele ye-KAIQUAN Group ehlanganisa indawo ephelele engama-square metres angama-34,000 nendawo yokwakha eyi-12,000 square metres. Ngabasebenzi abangama-630 manje okubandakanya onjiniyela abaphezulu abangama-63. Kunemishini engama-200 esezingeni eliphakeme efana namathuluzi omshini we-NC, amathuluzi omshini osayizi abakhulu, imishini yokulinganisa esheshayo, ukuhlolwa okungonakalisi amadivayisi we-welding okuzenzakalelayo.
IZhejiang Kaiquan Industrial Park yasungulwa ngoSepthemba 1968 futhi yaqanjwa kabusha njengeZhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co. Ltd. ngoMeyi 1994. Ihlanganisa indawo ephelele yamamitha-skwele angama-50,000 nendawo yokwakha engama-23,678 square metres eZhejiang. Manje inabasebenzi abangama-490 namasethi angama-213 wokucubungula nemishini yokuhlola enomthamo wonyaka wokukhiqiza ongaphezu kwama-100,000 amasethi anenani lokukhiqiza lonyaka wezigidi ezingama-35 zama-USD.
I-SKF igxilile eChina kanti iShanghai Kaiquan iya emhlabeni jikelele
NgoMeyi 9, 2018, uMnu Tang yurong, Svenska kullager-fabriken iqembu iphini likamongameli omkhulu kanye noMongameli we-SKF Asia, kanye noMnu Wang wei, uMongameli we-SKF China ...
NgoJulayi 3, 2019, iziqukathi ezintathu ezingama-40-foot zathunyelwa ngempumelelo zisuka ekomkhulu laseShanghai leqembu le-kaiquan zaya ethekwini le-chi chih, eVietnam, okufaka uphawu lwentuthuko entsha emakethe yaphesheya ye-kaiquan grou ...
Ukuhwebelana kwezobuchwepheshe kwenza i-kaiquan ithuthuke ngokwengeziwe
Muva nje, umhlangano wemboni yokuphakelwa kwamanzi edolobhaneni lase-guangxi futha esiteshini samandla wokongiwa kobuchwepheshe ukuguqulwa kobuchwepheshe bomhlangano uvulwe ngokusemthethweni, umhlangano ubuphethwe ukuhanjiswa kwamanzi e-guangxi kanye ne-dra ...